“Ninkii KULMIYE Loo Afduubay Wuxuu Is Yidhi Reerbaa Kuu Soo Afduubi, Waxaanse Leeyahay Waa Laga Baxay Wakhtigii Cidi Cid Afduubaysay”..Siyaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan | FooreNews
Home wararka “Ninkii KULMIYE Loo Afduubay Wuxuu Is Yidhi Reerbaa Kuu Soo Afduubi, Waxaanse Leeyahay Waa Laga Baxay Wakhtigii Cidi Cid Afduubaysay”..Siyaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan
“Ninkii KULMIYE Loo Afduubay Wuxuu Is Yidhi Reerbaa Kuu Soo Afduubi, Waxaanse Leeyahay Waa Laga Baxay Wakhtigii Cidi Cid Afduubaysay”..Siyaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan
Hargeysa (Foore)- Siyaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ka mid ah masuuliyiintii is-bahaysiga xisbiga KULMIYE ee la midoobay xisbiga WADDANI ayaa si qoto dheer uga sheekeeyey ujeedadii rasmiga ahayd ee ay ku doorteen xisbiga WADDANI kagana yimaaddeen xisbigii KULMIYE ee siyaasaddiisa la majaro habaabiyey isaga oo sheegay in uu danta qaranka u yimid xisbigaasi iyo sidii ay shacabka Somaliland wax u wada yeelan lahaayeen isaga oo ammaanay qaabkii loogu xoo dhaweeyey xisbiga loona qiimeeyey. Siyaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa uu si cad u sheegay in Is-bahaysigii Jeegaanta uu u baddalay is-bahaysiga Giraanta oo ay qaranka oo dhammi wax ku wada yeelan karaan, lana joogo wakhtigii umadda la midayn lahaa.
Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ka hadlayay madashii layaabka lahayd ee xafladda midawga Garabka Is-bahaysiga iyo xisbiga WADDANI ee Isniintii lagu qabtay Huteel Maansoor waxa uu yidhi: “Waxa laga yaabaa in la is waydiiyo maxaad WADDANI u timaaddeen. Waa su’aal dadku is waydiinayo. Waxaanan kaga jawaabaynaa waxaan WADDANI u nimid, waxa aannu KULMIYE uga tagnay waa la sheegay. Marar badanna waannu sharraxnay. Waxaanay ku kooban tahay hadalkii uu halkan ka jeediyey Cabdirisaaq Khaliif Saaxiibkay oo aanan dabadii calalinayn oo iga yaqaana oo iga af yaqaansan. Waxa aannu WADDANI u nimd in aannu ku badbaadino qaranka oo aannu ka badbaadinno hogaan xumo. Waxa aannu u taaganahay in dadka reer Somaliland laga saaro in ay u hogaansamaan ashkhaasta oo ay sharciga u hogaansamaan. Waxa aannu doonaynaa in aan dadka reer Somaliland ka saarno qoqobnaanta qabyaaladda. Waxa aan rabnaa in aan uga saarno isku duubnida iyo wax qada qabsiga iyo isku kaalmaysiga waxa wanaagsan ee danta umaddu ku jirto. Waxa aannu doonaynaa dadka reer Somaliland in aannu ka saarno isku qaybsiga danaystayaasha. Waxa aannu rabnaa is garabsiga aqoonta iyo aragtida siyaasadeed ee ku dhisan daryeelka Bulsho walaalo ah oo isku qiimeeya wanaagga, kartida iyo aqoonta. Somaliland waa qaran curdin ah oo u baahan in la taabbo galiyo. Waa qaran u baahan in laga hour mariyo adeegga bulshada oo mid walba oo aad taabataaba u baahan yahay in la hor mariyo. Waa qaran u baahan dhaqaale lagu taabo galiyo. Waxaannu ku iman karaa dawlad dhista hay’adihii loogu talo galay iyo kaabayaashii dhaqaalaha”.
“Abwaankii caanka ahaa ee Gaarriye waxaan ka xiganayaa Abkuu doono ha sheegtee, wuxuunbaa ehel ii ah dad ninkaan af aqaanno ee na midayso ujeeddo. In badan oo dadka ka mid ah oo ay ku weyn tahay ashkhaas iyo magacyo ay ku weyn tahay agtooda iyo xaafado, oo ay leeyihiin maxaad reer uga tagtay oo aad reer ugu tagtay. Maxaad hebel uga tagtay oo aad hebel ugu tagtay. Walaal waxaa nala weyn oo qiimo agtayada ka leh qaranka Somaliland. qaranka Somaliland baanu doonaynaa in uu noqdo mid isku qiimeeya Aqoonta, dimuquraadiyadda ee aan isku qiimayn ashkhaas iyo qabaa’il iyo reero taasi ayaannu diiddanahay. In badan oo aannu saaxiibbo iyo ehel nahay ayaa laga yaabaa in ay yidhaahdaan waar maxaad Jeegaantii u baabiinaysaa ee aad uga tagtay?, waar jeegaantii burburin mayno waannu kordhinaynaa oo giraan baannu ka dhigaynaa oo heer qaran baannu ka dhigaynaa. Ujeedadayadu waa in aannu qaranka isku xidhno. Haddii aannu shalay ahayn is bahaysigii KULMIYE ee isu bahaysanayay waxa wanaagsan waxaannu maantaan jecelahay in WADDANI isku bahaysto is bahaysi qaranka oo dhan ka kooban. Inta qabiilka ku dhaadanaysa waxaan leeyahay walaal qabiil iyo qaran meel ma wada galaan. Aynu qaran wada dhisanno oo aynu wada difaacno. Caytami mayno ee waxaannu la iman barnaamin wax qabad oo aanu ku kasbanno kuwaa buuxa quluubtooda. Laaluush ku keeni mayno waayo laaluushku qalbiga dadka wuu dilaa ee ma soo kaxeeyo oo ma soo dumo. Dadka laaluush gaashi maayo ee caddaalad baa gaadhaysa” ayuu yidhi Wasiirkii hore ee Wasaaradda Madaxtooyada Somaliland waxaanu intaasi ku daray:
“WADDANI in uu yahay xisbi qiimo leh waxa ay ka muuqataa sida uu u soo shaqeeyey iyo sidii uu noola macaamilay ee noo qaddariyey. Guddoomiyaha WADDANI waxaan qirayaa in uu yahay nin hogaamiye ah oo qiimo badan. Mudadii sannadka ahayd ee aannu bannaanka u soo baxnay. In ka badan Lix jeer ayuu albaabkayga soo garaacay oo muujiyey sida uu ii danaynayo, dhammaan kooxdaydii aan ka mid ahaana mid mid buu isula taagay. Nasiib Darro, ninkii xisbiga loo afduubay ee KULMIYE ee sida qaldan loogu cimaamaday aanu wali is odhan waar bal nimankii ka daba tag waa intaasi oo ay ku yeelaane. Waxa uu islahaa reer baa kuu soo afduubi doona, waxaan leeyahay waar reer waxba ma afduubo. Waa duni casri ah oo la isku qiimaynayo aragti iyo aqoon” ayuu yidhi Siyaasi Xirsi.
Previous PostWasiir Fashiliyay Arrimo Ay Qarinaysay Xukuumadda M/Siilaanyo Iyo Qorshe Cusub Oo Lagu Doonayo In Madaarka Berbera Laga Daba Geeyo Dekedda Berbera Next PostGarabkii U Horreeyay Ee Qaaddaca Shirka Golaha Dhexe Ee Xisbiga WADDANI Oo Iscadeeyay Iyo Afhayeen Ibraahim Buubaa Oo Sheegay Inay Heshiis La Furayaan!